Faallo: Ma saxbaa inaysan Soomaalidu culimo mdax u dooraan? - Caasimada Online
Home Maqaalo Faallo: Ma saxbaa inaysan Soomaalidu culimo mdax u dooraan?
Faallo: Ma saxbaa inaysan Soomaalidu culimo mdax u dooraan?
Su’aalihii shalay (17/11/2017) Sheekh Maxamed Cabdi Umal lagu waydiiyay masaajidkiisa ayaa waxaa ka mid ahaa maxay culimadu ooga qayb qaadan la’dahay hannaanka nabad soo celinta Soomaaliya. Sheekhu wuxuu ku jawaabay “miyaad culimo u doorateen inay in maamuulaan”? intaas wuxuu kusii daray “marki lagu yiri Soomaalidi soo doorta dad idin matalo ma jirin hal beel oo wadaad soo dooratay”. su’aal ayuu dadkii kusoo celiyoo waxaa uuna yiri “mise waxaad rabteen inaan kursiga xoog ku qabsanno oo aan dagal oogayaasha ku biirno?”
Sanad ka dib burburki dalka culimadu waxay si buuxdo ula wareegeen maamulka gobalka Bari, dhaqaalo iyo maamul labada oo waa looga haray laakiin mamul xumo iyaga ka timid iyo siyaasad la’aan ayaa dumisay.
Jabkii Boosaaso ma baabi’in dadaalkoodi ee waxay u hiil rogteen Gedo oo ay si buuxdo ula wareegaan maamulka gobalka Gedo intiisa badan. khaladaadki Boosaaso waxba kama aysan baran oo isla siyaasaddi iyo hab maamulki ayay la yimaadeen burburkoodina soo dadajisay.
Laakiin jabkaas kuma aysan lumin oo madexwaynahoodi oo shaatiga soo badashay ayaa sadex gu’ ka dib Filla Soomaaliya lagu soo dhaweey. Shariif ayaa watay koox culimo ah oo ay saaxiibo ahaayeen. wadaado qaarkood tafsiirka iyo saaxiixaynka akhrin jireen ayaa buuxiyay inta badan golaha wasiiradda. Hab maamulkoodi waxaa uu noqday ka dar oo dibi dhal. iyagiina waa sumcad beeleen rajadiina waa dileen.